Amacandelo kwiNgcaciso yoKwenza njani ukukhusela i-Spam yokudluliselwa kwi-Google Analytics - I-Semalt Advice
Kwiminyaka emibini, ukuthunyelwa kwe-spam ye-website kuye kwaba yingxaki ebalulekileyo. Imithombo yokudlulisela i-Spammy ingenza ukuba ucinge ukuba kukho ezininzi ukuvakatyeka kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics ngenxa yesikhephe ekuthungeni kwimizila kunye nemibiko engaphezulu.
I-spam yokudlulisa i-spam njenge-darodar, iifowuni zewebhusayithi, kunye neefowuni zokwabelana ezilula ziphakathi kwe injini yokukhangela izixhobo zokuphucula izinto eziye zaphazamisa ukusebenza kwewebhusayithi ye-e-commerce. I-Google Analytics ingenye yezixhobo ezibalulekileyo ezikunceda iinkampani kunye nabanini-shishini bezo shishino ukuba bahlaziye kwaye balandelele umendo olandelwa ziindwendwe zabo.
Nazi izicalulo ezimbalwa ezichazwe nguMax Bell, uMphathi weNtengo kaMthengi we-14 (Semalt , oya kukunceda ukuvimba ukugalelwa kogaxekile ekuthinteni ukusebenza kwewebhusayithi yakho.
Ukusebenzisa ifayile ye -htaccess
Ukuthintela ukuthunyelwa kwendlela yokuthunyelwa kogaxekile kuqhutywe ngendlela eyiyo ngokusebenzisa - company design fashion sport.htaccess. Ifayile yokuqwalasela isetyenziselwa ukuqhuba iseva yakho. Indlela ikhusela iwebhusayithi yakho ekubeni ilayishe ngokugqithisa kwaye ikhuphe izikhwama zokupakisha izibhengezo kwiziko lakho. Ukuthintela ukuthunyelwa kogaxekile nge-.htaccess kusebenza kakuhle kuba ifayile ingawalelwa ukuvimba ukutyelelwa kwe-spammy ngedilesi okanye idilesi ye-IP.
Inani elincinci lokuthengisa kunye nabanikazi bewebhusayithi bakhetha ukusebenzisa .htaccess ukuvimba ugaxekile wokuthunyelwa ekuthintekeni kokusebenza kwamashishini abo ase-intanethi. Ukufikelela okuxhamlileyo kungekhona kuphela iibhloko ezisusa ugalelo logaxekile kunye neengcambu zewebhusayithi ezivela kwi-GA kodwa kwakhona zikhusela idilesi enobungozi kumaseva awo.
Ukufaka uhlobo olulungileyo lomyalelo xa ungabandakanyi kunye nokuvimba ukugawula ugaxekile kukukhusela ukulahlekelwa ulwazi oluyimfuneko malunga newebhusayithi yakho. Ngaba uyazi ukuba ukusabalalisa kabini umlingani xa uqhuba umyalelo we-command ungawa Ibhizinisi leB2B? Ngaphambi kokuvimbela ugaxekile wokudlulisa usebenzisa umyalelo we-command, qwa lasela umnxibelelisi wewebhusayithi okanye khuphela i-plugin ye-WordPress.
Eminye imibuzo iye yavela ekufuneni ukucaciswa kohluhluko phakathi kweerobhothi kunye nefayile .htaccess. Ngokubhekiselele ku abaqulunqi bewebhusayithi , iifayile zeerobhothi zisebenza ekuncedeni i-bots zenjini kunye nee-spiders zewebhu ukuqhuba ithrafikhi kwiwebhusayithi kanti i -htaccess inceda abathengisi be-intanethi ukubeka umyalelo wokubamba ukuvimba ugaxekile, udidi lwee-IP, kwaye inkohliso.
Ukuthathwa kwe-GA ezifayile kwi-spam yokudlulisa
Xa kuziwa ekuthintela ugaxekile wokuthunyelwa kwi-akhawunti ye-Google Analytics, iifayile ze-Google Analytics zicetyiswa kakhulu. Iifayile ze-GA zivumela abathengisi be-intanethi nabathuthuli bewebhu ukuba bahlaziye idatha kunye neengxelo kwi-Google Analytics. Njengomthengisi, ungasebenzisa i-GA ukuba ungabandakanyi izithuthi zangaphakathi ezivela kwindawo yakho yokusebenza, ukuvimba ugaxekile logaxekile, kwaye ulawule iiplani ze-IP kunye nemimandla enobungozi kwi-website yakho.
Ungasebenzisa izihlungi zeGoogle Analytics ukukhupha iindawo ezinobungozi kunye nedarodar kwiziko lakho. Nazi iindlela ezimbalwa zokuhamba ngazo.
Qala i-akhawunti yakho ye-GA kwaye ungene ngemvume.
Cofa iqhosha le 'Admin Settings' kwaye ukhethe 'Zonke iifayile'.
Yenza icebo elitsha kwaye uvelise igama elitsha onokulikhumbula ngokulula.
Cofa kwi icon 'Iifayile zefayile' kwaye ukhethe uhlobo 'lwefayile ekhethiweyo.'
Cofa uze uthethele i-'Angavumelekanga, '' IP idilesi 'kwaye' ilingana 'neefayili kwiibhokisi ezinikezelwe kwi-akhawunti yakho ye-Google Analytics.
Gcwalisa idilesi ze-IP ukuba ungabandakanyi, kwaye nqakraza 'Londoloza.'
Xa ungabandakanyi iidilesi ze-IP kunye nokuthumela ugaxekile kwi-akhawunti yakho yakwa-Google Analytics, kucetyiswa ukuba uqaphele ukuba abafakiweyo abasebenzi kwiingxelo ezidlulileyo. Ukufumana iziphumo ezizinzileyo nezizimeleyo, cinga ukuvimba izizinda ze spammy usebenzisa i-Google Analytics kunye nefayile ye -htaccess. Ungalindi de iindawo ze-spammy zigqithise i-server yakho. Faka i-Google Analytics kwiwebhsayithi yakho kwaye uvimbele ugaxekile wokuthunyelwa, abaxhamli, i-traffic traffic kunye nezothutho zangaphakathi.